novembre 2015 – filazantsaramada
FA IZAHO KOSA TSY MBA MANADINO ANAO!
« Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika ho amin’ny fahatezerana,fa mba hahazo famonjena amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika. » I Tes 5:9 ***Ary hoy Jehovah tamin’i Noa: midira ao anaty sambo-fiara hianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria hianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao. Nankatoa ny Tenin’Andriamanitra i Noa ka nanamboatra sambo-fiara araka ny […]
Publié parfilazantsaramada novembre 27, 2015 novembre 23, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FA IZAHO KOSA TSY MBA MANADINO ANAO!
Voafonja vehivavy Antanimora
Fitoriana an-kira sy tantara an-tsehatra no nentina nankalazana ny Krismasy 2015 Ho an’ity taona 2015 ity dia fitoriana an-kira sy fanehoana tantara an-tsehatra no nentin’ireo voafonja vehivavy nakalazana ny Krismasy. Niarahana hatrany tamin’ny Feon’ny Filazantsara (FF) moa ny fanatanterahana izany izay notanterahina ny Talata faha 17 Novambra 2015. Tantaran’i Estera no nofidian’izy ireo ho lalaovina […]
Publié parfilazantsaramada novembre 23, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Voafonja vehivavy Antanimora
« Misento ao anatin’ity isika ka maniry indrindra hitafy ny tranontsika izay any an-danitra koa. » II Korintiana 5:2 ***Ny apostoly Paoly no manoratra izao teny izao ho an’ny Korintiana, ary ny resahiny eto dia ny amin’ny trano lay ety antany izay mety rava, ary voalaza eto amin’ity II Korintiana toko faha dimy ity fa azo ravana, […]
Publié parfilazantsaramada novembre 20, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur SENTO!
«Henoy ny Feony»
Fandaharana amin’ny fampielezam-peo Tianay hatrany ny mampahatsiahy fa ny taona 2010 no nanomboka namokatra fandaharana amin’ny fampielezam-peo “Henoy ny feony” ny Feon’ny Filazantsara (FF). Fandaharana ho an’ny tanora izy io; ka entina hanehoan-kevitra, ao anatina famoaboasan-kevitra sy hijerena izay ambaran’ny Soratra Masina manodidina ny fanabeazana azy ireo. Raha enina no isan’ireo fampielezam-peo mpiara-miasa teo aloha […]
Publié parfilazantsaramada novembre 20, 2015 décembre 3, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur «Henoy ny Feony»
ANDRIAMANITRA TENA ANDRIAMANITRA, SADY OLOMBELONA.
« Nefa andrao isika hanafintohina azy, dia mankanesa amin’ny ranomasina hianao, ka manjonoa; ary raiso izay hazandrano azo voalohany, ka rehefa sokafanao ny vavany, dia hahita vola sekely eo hianao; dia raiso izany, ka omeo azy ho avy amiko sy hianao. » Matio 17:27 – Nanetry tena ho tonga olona Jesosy: Moa ny mpampianatra anareo tsy mba […]
Publié parfilazantsaramada novembre 13, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur ANDRIAMANITRA TENA ANDRIAMANITRA, SADY OLOMBELONA.
Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana
Mpianatra manaiky an’i Jesosy ho Mpitarika sy Mpampianatra Ho an’ny taom-pianarana vaovao 2015/2016, dia tonga nanentana ireo mpianatra eny amin’ny Lycée Nanisana indray ny solon-tenan’ny Feon’ny Filazantsara mba hianaran’izy ireo ny tenin’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana izay efa atao eny an-toerana. Izany moa dia natao nandritra ny fananganan-tsaina ny Alatsinainy 02-11-2015 maraina lasa […]
Publié parfilazantsaramada novembre 11, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Feon’ny Filazantsara (FF) sy ny Lycée Nanisana
IZAY MANONONA NY ANARAN’NY TOMPO,…
« Moa entina va ny jiro mba ho saronan’ny vata famarana, na hatao ao ambany farafara? Tsy hatao eo amin’ny fanaovan-jiro va izy? » Marka 4:21 ***Eo amin’ny fiainana andavan’andro dia tsy mahita ny olombelona rehefa ao amin’ny maizina, ary eo no ilàny ny jiro. Ny jiro dia natao mba hanazava ny maso, tsy mahita rehefa maizina. […]
Publié parfilazantsaramada novembre 6, 2015 décembre 3, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur IZAY MANONONA NY ANARAN’NY TOMPO,…
Tanora mpianatra sy ny asa Fitoriana
“Mandehana amin’izao herinao izao” Mpitsara 6:14 Miezaka hatrany mandresy lahatra ireo mpianatra hianatra ny Tenin’Andriamanitra ny mpitarika ny Fikambanana “Tanora Taratry ny Filazantsara” TTF eny amin’ny Oniversite Ankatso Antananarivo. Nandalo teto amin’ny Foibe FF moa izy ireo nangataka fiaraha-miasa ny hitoriana ny Filazantsara eny an-toerana, amin’ny alalan’ny “Fampianarana Soratra Masina Ifandraisana” na ny Cours Biblique […]
Publié parfilazantsaramada novembre 5, 2015 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Tanora mpianatra sy ny asa Fitoriana